HomeWararka CiyaarahaHeshiiskii Manchester United Kula Soo Wareegtay Cristiano Ronaldo Oo Baadhitaan Lagu Samaynayo
December 3, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Booliska ayaa weeraray xafiisyada kooxda Juventus, waxaanay ku samaynayaan baadhitaan sal iyo baar ah oo la rumaysan yahay inay sabab u noqon karaan in kooxdaas dib loogu celiyo heerka labaad, isla markaana laga qaado horyaalkeedii ugu dambeeyey ee ay ku guuleysatay.
Waxa kale oo baadhitaan lagu samaynayaa heshiiskii ay kooxdaasi kaga iibisay Manchester United laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, kaas oo isagana si gaar ah farta loogu fiiqay.
Jimcihii hore ayay boolisku la wareegeen xafiisyada Juventus ku leedahay magaalooyinka Turin iyo Milan kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya inkooxdaasi diiwaangelisay heshiisyo been abuur ah intii u dhaxaysay 2019 illaa 2021, iyada oo ka been sheegtay qiimaha ay ku iibsatay ama ku iibisay ciyaartooyo yimid ama ka baxay Allianz Stadium.
Heshiisyada lagula jiro ciyaartoyda, biilashii lacagaha ee ay kooxaha kale wadaageen, warbixinta xisaabeed ayaa intaba ay boolisku ay gacanta ku dhigeen oo caddaymo ahaan looga qaatay, kuwaas oo lagu samaynayo baadhitaan dheeraad ah.
Madaxweynaha Juventus ee Andrea Angelli iyo ku-xigeenkiisa Pavel Nedved iyo sidoo kale agaasimaha Tottenham ee Fabio Paratici oo Juventus ka shaqeeyey intii u dhaxaysay 2010 illaa 2021 ayaa iyagana baadhitaano dheeraad ah lagu samaynayaa.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in meelaha sida gaarka ah isha loogu hayo ee baadhitaanka lagu samaynayo ay ka mid tahay £12.9 milyan oo Gini oo ay xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo kaga iibisay Manchester United, kaas oo abuuray sas badan.
Heshiiskaas ayaa miisaaniyadda Juventus waxa uu ku yeeshay 14 milyan oo Euro oo hoos-dhac maaliyadeed ah sannad-miisaaniyadeedka 2020/21, sida ay kooxdu sheegtay.
Wargeyska La Gazzetta dello Sport ayaa telefoon kula hadlay agaasimeyaasha Juventus, si uu wax uga weydiiyo waxa ka jira in heshiiskii Ronaldo ay ku iibiyeen aanu ahayn wax ‘dhab ahaan u jiray’ marka laga eego macluumaadka ay hadda hayaan boolisku ee ay baadhitaanka ku samaynayaan.
Warka ayaa intaa ku daray, in Juventus ay ku fashilantay inay sharraxdo ama faahfaahin ka bixiso sababta keentay in Ronaldo ay ku iibiyaan lacagta intaas le’eg iyadoo la ogyahay in laacibka reer Portugal uu yahay ciyaartoy weyn oo ay ku heli karayeen intaas in ka badan.
42 heshiis oo ay ciyaartooyo la gashay Juventus ayaa baadhitaanku taaban doonaa, waxaana ka mid ah Joao Cancelo, Arthur Melo, Danilo, Cristian Romero iyo Miralem Pjanic.